Oslo: Hadii aad degantahay xaafadahan, iska kar-kari biyaha tuubada. - NorSom News
Oslo: Hadii aad degantahay xaafadahan, iska kar-kari biyaha tuubada.
Maamulka degmada Oslo ayaa dadka degan xaafadaha Etterstad og Teisen ee Oslo ugu baaqayo inay iska kar-kariyaan biyaha cabitaanka ee tuubada. Digniintan ayaa ah tii labaad isbuuc gudihiis,
Arintan ayaa timid kadib markii mid kamid ah haamaha lokalka ah ee biyaha u keydiyo tuubooyinka xaafadaas lagu arkay nooc kamid ah baran-baro.
Baaritaano la sameeyay ayaa la sheegay in ilaa hada aan la arkin wax bakteeriyo oo laga helay tijaabooyinka laga qaaday biyaha xaafadahas, balse Oslo kommune ayaa wali dadka degan xaafadahaas ugu baaqayo inay biyaha tuubada ay karariyaan, kahor inta aysan cabin.
Xigasho/kilde: Drikkevannet må fortsatt kokes i deler av Oslo
Previous articleWaxey u shaqeyn jirtay ceyrta: 159 milyan ayay xaday.
Next articleHooyo loo maxkamadeynayo inaysan wiilkeeda u cadayin: 16 ilig ayaa laga soo saaray.